DHAGEYSO:Hoggaamiyaasha Maamullada Soomaaliya oo arrimaha doorashada ka shiray | Star FM
Home Wararka Soomaaliya DHAGEYSO:Hoggaamiyaasha Maamullada Soomaaliya oo arrimaha doorashada ka shiray
DHAGEYSO:Hoggaamiyaasha Maamullada Soomaaliya oo arrimaha doorashada ka shiray
Madaxweynayaasha shanta maamul goboleed ee Soomaaliya ayaa xalay yeeshay kulan dhanka taleefoonka ka dib dadaallo socday maalmihii la soo dhaafay oo beesha Caalamka ay qayb ka ahayd kuwaas oo la doonayay in xal looga gaaro khilaafka ka taagan doorashooyinka Soomaaliya.
Kulanka ayaa waxaa ka qeyb galay Madaxda Puntland, Jubbaland, Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Hirshabeelle iyadoo diiradda lagu saaray sidii dalka Soomaaliya ay uga dhici lahayd doorasho lagu wada qanacsan yahay.
Kulanka Qodobada looga hadlay waxaa ka mid ah Xaaladda Gobolka Gedo iyo muranka ka taagan Guddiga doorashooyinka ee lagu muransan yahay.
Ilo lagu kalsoonaan karo ayaa xaqiijiyay in Madaxda ay ku heshiiyeen in la xalliyo khilaafka ka taagan doorashada waxaana ay ku balameen kulan deg deg ah.
Dhanka kale Ururrada Bulshada Rayidka Soomaaliyeed oo Kulan ku yeeshay Magaalada Muqdisho ayaa waxay Kulankooda ugu hadleen arrimaha doorashada ee Khilaafku hareeyay iyo sida ugu haboon ee Xal kama dambays ah looga gaari karo.
Guddoomiyaha ururada Bulshada Rayidka Soomaaliyeed ayaa soo koobaya qodobada ay kulankooda ka soo saareen iyo baaqa ay dhinacyada isku Khilaafsan doorashada Soomaaliya u dirayaan.
Previous articleSAWIRO:Burnley oo soo gabagabeysay rikoorkii guuldarro la’aanta 68 kulan Reds ee garoonkeeda
Next articleDHAGEYSO:Dadka ku nool qaxootiga oo rajo wanaagsan ka muujiyay Joe Biden